Ọnọdụ ọhụrụ nke COVID-19 Omicron enwetara na Japan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Ọnọdụ ọhụrụ nke COVID-19 Omicron enwetara na Japan
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Mmachibido iwu ndị mbata si mba ọzọ malitere na Tuesday ma ga-adị ihe dị ka otu ọnwa, n'oge a chọrọ ụmụ amaala Japan na ndị mba ọzọ nwere ọkwa bi na-alọta na mpaghara ihe egwu dị elu ka ha kewapụ iche ruo ụbọchị iri n'ụlọ ọrụ gọọmentị họpụtara.
Gọọmentị Japan kwupụtara taa na otu nwoke dị afọ 30, nwalere ihe dị mma maka coronavirus na ụlọ ọrụ ahụ Narita International Airport, mgbe o si Namibia bịa na Sọnde, butere ọrịa Omicron ọhụrụ dị egwu nke COVID-19.
Nke a bụ ikpe izizi enwetara n'ihu ọha gbasara ọrịa nje Omicron na mba ahụ.
Dị ka ndị ọrụ ministri ahụike siri kwuo, nwoke ahụ enweghị akara ọ bụla mgbe ọ nọ Narita International Airport mana enwere ahụ ọkụ na Mọnde, ebe ndị ezinaụlọ abụọ ya na ya na-eme njem anwalela ihe adịghị mma ma kewapụ ya n'ụlọ ọrụ gọọmentị họpụtara.
Japan Mịnịsta ala Fumio Kishida zutere ndị otu ụlọ ọrụ gụnyere Minista ahụike Shigeyuki Goto iji kparịta ka gọọmentị ga-esi meghachi omume na nchọpụta nke ụdị Omicron na. Japan, nke hụrụla mbelata na ikpe COVID-19.
Ụnyahụ, Kishida kwupụtara na gọọmentị ga-amachibido iwu mbata nke ndị mba ọzọ niile. O kwere nkwa ime ngwa ngwa na nchegbu maka ụdị Omicron ọhụrụ nke COVID-19.
Japan ewerelarị usoro ndị siri ike dị otú ahụ maka ndị garala obodo nke ọ bụla n'ime mba Africa n'oge na-adịbeghị anya - Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zambia na Zimbabwe.
Japan ga-akwụsịtụ mmachi mmachi ntinye na nso nso a malite na Nọvemba 8, nke nyere ndị njem azụmaahịa ịgba ọgwụ mgbochi ohere ịnwe oge iche iche wee malite ịnakwere ngwa ntinye n'aka ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ nka na ọnọdụ na nzukọ ndị ọbịa ha kwetara iburu ọrụ nke. nyochaa mmegharị ha.
Malite na Wednesde, mba ahụ ga-edobekwa okpu kwa ụbọchị maka ndị bịarutere na 3,500, gbadata site na 5,000. A ga-achọrọ ụmụ amaala Japan na-alọta na ndị si mba ọzọ ịnọpụ iche maka izu abụọ n'agbanyeghị ma agbachala ha ọgwụ.
Ternyaahụ, edekọtara ikpe 82 ọhụrụ enwetara COVID-19 n'ofe Japan, ọnụ ọgụgụ dị ala nwere ike ịbụ n'ihi mbelata ule na ngwụsị izu. Ọrịa nje gara aga nke ụdị Delta kpatara n'oge ọkọchị hụrụ ọnụ ọgụgụ kacha elu karịa 25,000 kwa ụbọchị.